Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Naanị 10% n'ime otu ijeri ụgbọ ala nwere nchekwa
Nchọpụta ọhụrụ sitere na Canalys na -egosi na etinyere atụmatụ enyemaka ọkwọ ụgbọ ala dị elu (ADAS) n'ime naanị 10% nke ụgbọ ala ijeri 1 a na -eji n'ụwa niile na njedebe nke 2020. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụgbọ ala ọhụrụ na -ere ugbu a na atụmatụ ADAS na nnukwu ahịa dị ka Mainland. China, Europe, Japan, na US, mana ọ ga -abụ ọtụtụ afọ tupu etinyere ha n'ime ọkara ụgbọ ala niile n'okporo ụzọ ụwa.
Njirimara ADAS gụnyere njikwa ụgbọ mmiri na-emegharị emegharị, enyemaka idobe ụzọ, braking mberede akpaka, na anya kpuru ìsì. N'iji ihe mmetụta na igwefoto, atụmatụ ndị ahụ nwere ike mee ka ụgbọ ala dị anya site n'ụgbọ ọzọ dị n'ihu, dobe ụgbọ ala na -aga n'okporo ụzọ ya, weta ụgbọ ala na nkwụsị zuru oke n'oge ihe mberede, chọpụta ụgbọ ala ndị ọzọ ma ọ bụ ndị na -agafe agafe na -abịaru nso na ndị ọzọ.
DAS n'ụgbọ ala ọhụrụ rere
Njirimara ADAS na-adịwanye ka ọkọlọtọ ma ọ bụ dị ka nhọrọ n'ime ụgbọ ala ndị ama ama na ọbụna ụdị ọkwa. Dịka ọmụmaatụ, nyocha sitere na Canalys na-egosi na njirimara enyemaka ụzọ, nke mgbe etinyere ya na-enye enyemaka enyemaka iji dobe ụgbọ ala n'okporo ụzọ ya, etinyere na 56% nke ụgbọ ala ọhụrụ ere na Europe na ọkara mbụ nke 2021, 52% na Japan, 30% na Mainland China na 63% na US. Canalys akọwaala nke ọma maka atụmatụ ADAS niile agbakwunyere n'ụgbọ ala ọhụrụ, site na nnukwu ahịa na nkeji iri na ise.
“Nsonye nke atụmatụ ADAS n'ime ụgbọ ala ọhụrụ ga -enwe mmetụta dị mma na nchekwa okporo ụzọ, na -ebelata ọnụ ọgụgụ ihe ọghọm ma si otú a na -anwụ, n'ihi na ọtụtụ ihe ọghọm na -akpata ndọpụ uche ma ọ bụ mmejọ. Atụmatụ ADAS na -arụsi ọrụ ike iji chekwaa ndị ọkwọ ụgbọ ala, ndị njem na ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ, "Chris Jones, onye isi nyocha maka ụgbọ ala na Canalys kwuru. "Mana ka ntinye nke atụmatụ enyemaka ọkwọ ụgbọ ala a n'ime ụgbọ ala ọhụrụ na -eto nke ọma, ebe ọ bụ na afọ ndụ nke ụgbọ ala eji eme ihe karịrị afọ 12, a ga -erekwa ihe na -erughị nde 75 na 2021, ọ ga -ewe. ọtụtụ afọ tupu ọbụna ọkara nke otu ijeri ụgbọ ala eji eme ihe n'ụwa niile nwere atụmatụ ndị a. ”
ADAS n'ime debanye aha ụgbọ ala eji
“Na njedebe nke 2020, Canalys mere atụmatụ na enwere ijeri ụgbọ ala ijeri 1.05 gburugburu ụwa. Mana isi ihe ADAS ka etinyere naanị n'ihe dịka 10%, "Jones kwuru. "N'ịtụle ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala a na-eji ka nọ ihe ruru otu ijeri akara afọ iri a, nke a bụ ohere dị ogologo oge dị egwu maka ndị na-anya ụgbọ ala na ọkachasị ndị na-eweta teknụzụ ADAS na ndị mmekọ. Ụgbọ ala nde 900 dị n'okporo ụzọ ugbu a enweghị atụmatụ ADAS.
“Iweghachite atụmatụ ADAS n'ime ụgbọ ala ochie abụghị nhọrọ - uru nchekwa ga -abata n'ụgbọ ala ọhụrụ. Ohere ADAS n'ime afọ iri na -abịanụ na karịa gafere, "Sandy Fitzpatrick, VP na Canalys kwuru. “Ọnọdụ akụ na ụba ga -agbada ọnụahịa nke ihe mmetụta achọrọ maka ADAS, mana n'agbanyeghị nke a, Canalys na -ebu amụma ugbu a na naanị ihe dịka 30% nke ụgbọ ala eji eme ihe ga -enwe atụmatụ ADAS na 2025 yana ihe dị ka 50% na 2030. Ndị na -anya ụgbọ ala nke nwere ike ịgụnye ha. dị ka ọkọlọtọ n'ụgbọ ala ọhụrụ ha niile, na -enweghị nnukwu ego, ga -enwe uru asọmpi. "
Nsonye ntinye nke ADAS n'ime ụgbọ ala ọhụrụ ga -enyere aka ịbawanye ntinye. Atụmatụ nchapu iwepu okenye, ihe na -emetọ emetọ, obere ụgbọ ala na -adịghị ize ndụ n'okporo ụzọ ga -enyekwa aka. Mana nkwukọrịta siri ike, ọgbọ na-achọ na agụmakwụkwọ gbasara uru ADAS bụ isi-ndị na-azụ ahịa kwesịrị ịchọ ụgbọ ala nwere ADAS, atụmatụ ndị ahụ ga-adị mfe iji, ha ga-akwalite ha anaghị egbochi ahụmịhe ịnya ụgbọ ala, ndị ọkwọ ụgbọala ga-atụkwasị obi ma jiri ya. atụmatụ.
Ọ bụ ihe nwute, n'ihi ụkọ akụrụngwa na nso nso a na ọrịa na -efe efe, ụlọ ọrụ na -anya ụgbọ ala enwetala nnukwu ọgba aghara n'ime ọnwa iri na asatọ gara aga. N'inwe ogologo oge ichere maka ụgbọ ala ọhụrụ, ahịa ụgbọ ala ejiri mee ihe nwere ndụ ọhụrụ. Site na ọnụ ọgụgụ ADAS dị ala n'ụgbọ ala ndị a na -eji, uto nke ntinye ADAS ga -emetụta n'ime obere oge.